MTK (MTK 6582&6589) သုံး CPU ဖုန်းများ Unknown Baseband နဲ့ IMEI & SN Error တွေကို DB File လေးနဲ့ Fix ကြမယ်.2~ ဘလော့ခရီးသည်
MTK (MTK 6582&6589) သုံး CPU ဖုန်းများ Unknown Baseband နဲ့ IMEI & SN Error တွေကို DB File လေးနဲ့ Fix ကြမယ်.24:57:00 am
တနေ့ က ပြောထားတဲ့အတိုင်း mtk 6575&6572 အတွက်
Baseband Unknown ကို MTK Droidtool နဲ့ fix လုပ်တဲ့နည်းကို ပြောပြပေးပီးပါပီ
ဒီနေ့တော့ IMEI & SN Writer ကို အသုံးပြုပီး MTK6582& 6589 တွေကို သူ့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ DB ဖိုင်ကို
အသုံးပြုပီး IMEI နဲ့ SN တွေ ပြန်ရေးနည်း တင်ပေးမှာပါ
ကဲအရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ tool နဲ့ DB ဖိုင် ကို ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
IMEI & SN Writer V 1.5.3 (4.43) MB
Download >>>>> http://sh.st/TZtSQ
Rar Password >> www.minokekar.net MTK6582 DB File (5.28) MB
Downlaod >>>>> http://sh.st/TZt78
Rar Password >> www.minokekar.net MTK6589DB File (5.30) MB
Download >>>>> http://sh.st/TZylm
Rar Password >> www.minokekar.net ကဲ ပီးပီဆိုရင်အရင်ဆုံး DB ဖိုင်တွေကို zip ဖြည်ထားပါ
ပီးရင် IMEI&SN Writer ကို Zip ဖြည်ချပီး exe ကို Right Click >>> Run As Administrator နဲ့ ဇွင့်ပါ..
ပီးရင် ဒီနေရာမှာ SMART PHONE ကို ရွေးပေးပါ. ok ပီးရင် imei အကွက်မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပီး
IMEI အမှန်သိရင်ထည့်ပါ. မမှတ်မိတော့ရင်လည်း
ပီးရင် Start ကိုနှိပ်ပါ.
Modern & AP2ဖိုင်ရွေးရပါလိမ့်မယ်.ပထမ တစ်ခါတက်လာပီး
Modern DB File တောင်းရင် ပြထားတဲ့ ဖိုင်လို ပုံစံ ရွေးပေးပါ (BPL.xxxx) နောက်တစ်ခါ တစ်လာပီး AP ဖိုင် ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်. ဒုတိ တစ်ခါ ရွေးပေးရမှာက
AP နဲ့ စတဲ့ဖိုင်ပါ.. (APDB.xxxx ) OK?
ကဲ ရွေးပေးရင်ရင်တော့ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ..
Boot Key တစ်ခုခု နှိပ်ပီး ဖုန်းကို PC နဲ့ ချိတ်ပါMTK Chepset Boot Key (Vol Up or Vol Down)
နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ် တစ်ခုမရတစ်ခု စမ်ကြည့် ကဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ..
Posted in: Android Error ဖြေရှင်းနည်းများ